XOG: Maxay aheyd Sababtii uu maanta u baaqday kulankii Aqalka sare ee BF Somaliya? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Maxay aheyd Sababtii uu maanta u baaqday kulankii Aqalka sare ee...
XOG: Maxay aheyd Sababtii uu maanta u baaqday kulankii Aqalka sare ee BF Somaliya?
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa Axadda maanta ah baaqday, shirkii golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, kaddib markii ay ku kala qeybsameen guddoonka iyo Senatorrada Golaha.
Ajandaha kulanka oo ahaa wax ka beddel lagu sameeyo xeer hoosaadka golaha Aqalka sare si shirarka Aqalka loogu qabto Zoom-ka.
Baaqashada kulanka kadib ayaa Xubno ka tirsan Aqalka sare oo Warbaahinta la hadlay waxaa ay sheegeen inay ka soo horjeesteen in aalada Zoom-ka lagu shiriyo Sanetarada Golaha, taas oo ay ku tilmaameen in ay tahay sharci darro.
Senatorrada Golaha Aqalka ayaa ku baaqeen in si deg-deg ah loo furo fadhiyada golaha Aqalka sare, maadama maanta uu baaqday kulanka.
Ugu dambeyn, waxay sidoo kale ku baaqeen in si wadajir ah kulamada labada gole loo qabto, xiliyada laga doodayo arrimaha doorashooyinka dalka.
Shirka Golaha Aqalka sare